M-Bwel (Online Editor) Website URL: 18
Jul Published in World News Be the first to comment! ပါလီမန်က အသစ်ပြဋ္ဌာန်းလိုက်သော တရားစီရင်ရေး ဥပဒေများကို ပိုလန်ပြည်သူများ ဆန္ဒပြ ဝါဆော၊ ဇူလိုင် ၁၇
ပိုလန်နိုင်ငံဝါဆောမြို့တွင် တရားစီရင်ရေးလွတ်လပ်မှုကို ထိပါးစေနိုင်သော အချက်များပါရှိသည့် တရားရုံးပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းမှုအသစ်ပြဋ္ဌာန်းခဲ့၍ ဆန္ဒပြသူထောင်ပေါင်းများစွာသည် ဇူလိုင် ၁၆ ရက်က ဒီမိုကရေစီကြွေးကြော်သံများဟစ်ကြွေးကာ ဆန္ဒပြထုတ်ဖော်ခဲ့ကြသည်ဟု ဇူလိုင် ၁၇ ရက်သတင်းများအရ သိရသည်။ Read more... 18
Jul Published in Others Be the first to comment! ထိုင်းတွင် တရားမဝင် အလုပ်သမားများ အနက် မြန်မာ ၆ဝ ရာခိုင်နှုန်း ရှိ၊ ဥပဒေသစ်ကြောင့် အလုပ်သမား ပြတ်လပ်ပြီး စားသောက်ဆိုင်များနှင့် ဟိုတယ်များ လုပ်ငန်းထိခိုက်၊ အချို့ပိတ်လိုက်ရ ရန်ကုန်၊ ဇူလိုင် ၁၇
ထိုင်းရှိ တရားမဝင်အလုပ်သမားများတွင် မြန်မာအလုပ်သမား ၆ဝ ရာခိုင်နှုန်းအထိရှိ နေပြီး လက်ရှိဥပဒေအသစ်ကြောင့် ¤င်းတရားမဝင်အလုပ်သမားများဖြင့် လည်ပတ်နေရသော ထိုင်းနိုင်ငံရှိ စားသောက်ဆိုင်များနှင့် ဟိုတယ်များတွင် အလုပ်သမားပြတ်လပ်၍ လုပ်ငန်းထိခိုက်ပြီး အချို့စားသောက်ဆိုင်များပိတ်လိုက်ရကြောင်း ဇူလိုင် ၁၇ ရက်က ဘန်ကောက်ပို့စ်သတင်း တွင်ဖော်ပြခဲ့သည်။
Jul Published in Political Be the first to comment! ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ဝန်ကြီးချုပ်က တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်ထံ တောင်းပန်စာပေးပို့ နေပြည်တော်၊ ဇူလိုင် ၁၆
၂ဝ၁၇ ခုနှစ် ဇူလိုင် ၉ ရက်က ရန်ကုန်မြို့၊ ဆီဒိုးနားဟိုတယ်၌ကျင်းပသည့် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများအတွက် အလုပ်အကိုင်ဖန်တီးပေးရေးအရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းနှင့် မီဒီယာစီမံကိန်း အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်က ''အရပ်ဘက်၊ စစ်ဘက်ဆက်ဆံရေးဆိုတာ ဒီမိုကရေစီခေတ်မှာမရှိကြောင်း၊ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဆိုတာ Protocol အရ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် Level ပဲဖြစ် ကြောင်း'' ပြောကြားခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ လိုအပ်သလို စိစစ်အရေးယူနိုင်ရန်အတွက် တပ်မတော်အနေဖြင့် နိုင်ငံတော်အစိုးရထံတင်ပြထားခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။
23...56789...11Page7of 2912 Latest Articles ရန်ကုန်၊ ဇူလိုင် ၂၂-''စံမညီတရား မဝင်ဆေးဝါးနှင့် ဆေးဝါးအတုတို့၏ အန္တရာယ်ကို ကြိုတင်ကာကွယ်ရေး နှင့် တိုက်ဖျက်ရေးဆိုင်ရာလူထု ပညာပေးပြပွဲ''ကို ဇူလိုင် ၂၉ ရ...23-07-2017 Hits:24 Others မိုးဆက်ကို ခန္တီး၊ ဇူလိုင် ၂၂ - စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒေသကြီး ခန္တီးမြို့ ချင်းတွင်းမြစ်ကမ်း တစ်လျှောက်တည်ဆောက်ထားသည့် ချင်းတွင်းမြစ်တာရိုး ဇူလိုင် ၁၈ ရက်ကပြိုကျခဲ့ရာ လူ...23-07-2017 Hits:52 life မိုးဆက်ကို ရန်ကုန်၊ ဇူလိုင် ၂၂-စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒေသကြီးတွင် ရေကြီးမှုကြောင့် ရက် ပေါင်း ၂ဝ ခန့်ပိတ်ထားခဲ့ရသော အခြေခံပညာကျောင်းပေါင်း ၃ဝဝ ကျော် အနက် ၁ဝဝ ကျော်ကို ပြ...23-07-2017 Hits:51 life မိုးဆက်ကို စတော့ဟုမ်း- ဆွီဒင်ဒါရိုက်တာ တစ်ဦးဖြစ်သူ အန်ဒါဝီဘာ့ဂ်ျက ဖန်တီးနေတဲ့ Ambiancé ဆိုတဲ့ ရုပ်ရှင်ကားဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အ ချိန်အကြာဆုံး ရုပ်ရှင်အဖြစ် စံချိန် တင...23-07-2017 Hits:180 World News မိုးဆက်ကို Business Info